> Resource > Ladnaansho > Recovery Image GIF: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray GIF Image
U baahan tahay caawimo inuu ka soo kabsado tirtiray GIF Image!
Waxaan helay muuqaalo badan oo GIF gaar ah ka saaxiibkay oo waxaan ku kaydsan oo dhan oo iyaga ka mid ah oo ku saabsan baabuur aan USB. Qaar ka mid ah sababo gaar ah, gal ah in ay ku jiraan muuqaalo GIF ku USB waxaa kaliya haatan la tirtiray. Ma lihi nuqul oo ka mid ah on my computer. Sidaas, waxaa suuragal ah in ay i bogsii images GIF tirtiray ka drive aan USB? Fadlan kula talinayaa. Thanks.
Sawirada GIF tirtiray aan si dhab ah "waayay" ka wadid aad USB. Waxay si joogto ah baabi'i doontaa marka la overwritten by files cusub ee drive ka. Tani waxay suurtogal ah in aad ka bogsato image GIF inta aad joojiso isticmaalka wadid aad USB degdeg ah iyo raadiyo barnaamij soo kabashada xogta ikhlaas iyo caawimaad.
Taas macnaheedu waxaa weeye, waad joojin kartaa adiga oo isticmaaleya isticmaale muhim M4 SSD iyo raadiyo barnaamijka xog muhim ah M4 si ay kuu caawiyaan. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa sida barnaamij lagu kalsoonaan karo image GIF soo kabashada. Qalabkani waxa uu awood kuu siinayaa inuu ka soo kabsado lumay, tirtiray, formatted iyo kharribeen images GIF hab aan caadi ahayn mid fudud oo ammaan ah. Arrinta No aad rabto in aad soo kabsado image GIF lumay ka drive adag computer ama qalab lagu kaydiyo dibadda sida kaadhka xusuusta iyo USB drive, barnaamijkan had iyo jeer waa saaxiibkaa ugu fiican. Plus, taas qalab kama dambaysta ah waa awoodaa inuu ka soo kabsado dhammaan noocyada file ka qalab aad sidoo kale, sida dhammaan qaabab image, videos, files audio, document files, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah oo ka mid ah barnaamijka Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado image GIF hadda!
Kabsado tirtiray GIF Image 3 Talaabooyinka
Barnaamijkan waxa si buuxda u la jaan qaada Windows computer iyo qalab Mac. Labada qeybood oo ay isla soo kabsado habka. Waxaan idin tusin doonaa sida loo sameeyo dib u soo kabashada GIF image la version Windows barnaamijka.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho inuu ka soo kabsado lumay image GIF
Ka dib markii ay ku rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode inuu ku soo bilowdo.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado image GIF ka your computer, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo barnaamijka kale xijaab / drive on your computer.
Tallaabada 2 xijaab Scan / kaxayn raadiyo badiyay images GIF
In tallaabadaas, waxaad dooran kartaa xijaab / wadato isticmaalka computer iyo guji "bilow" button furmo si ay u bilaabaan baar foomka badiyay images GIF.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado images GIF ka kaydinta warbaahinta dibadda, fadlan ku xirmaan your computer.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray image GIF
Marka iskaanka ay ka badan tahay, ka helay files ee drive ee la marsiiyey lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama "Jidka" category. Waxaad Kulanka Xiisaha Leh laga heli karaa files GIF in lagu hubiyo sida badan oo sanamyadiinna GIF lumay la soo kabsaday karo
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad GIF lumay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on drive kale on your computer.